नबुझिकन पुना ब्राण्डको अफिसियली विशेषज्ञमा म नियुक्त भएको होइन – YesKathmandu.com
रुक्सा वैद्य श्रेष्ठ,सौन्र्दय व्यवसायी
रुक्सा वैद्य श्रेष्ठ सौन्दर्य व्यवसायीहरुको माझमा चिरपरिचित नाम हो । विगत १४ बर्ष देखि व्युटिसियन पेशामा आवद्ध वैद्य सिटिइभिटिइ अन्र्तगतको परीक्षा वोर्ड सदस्य समेत हुन । राजधानीको नक्साल,भगवतीवाहलमा ‘स्कूल अफ व्युटिसियन आइटिसी स्किल डेभलपमेन्ट सेन्टर’ सञ्चालन गर्दै आइरहेकी रुक्सा न्युजिल्याण्ड बेस रहेर उत्पादन हुँदै आएको पुना व्राण्डको अफिसियल व्युटी विशेषज्ञ समेत हुन । दशैंको पूर्वसन्ध्यामा नारी र श्रृंगारको सेरोफेरामा रहेर उनीसँग गरिएका कुराकानीको अंश:
यो पेशामा कसरी लाग्नुभयो ?
सुरुमा आफ्नो खाली समयलाई सदुपयोग गर्नका लागि यो व्यवसायमा लागेको थिँए । नारी भने जातैले सुन्दरता र श्रृंगारमा रुची राख्ने जात । त्यसैमा केन्द्रीत हुने भएको कारण आफ्नो रुचीकै क्षेत्र भएको कारण म सौन्दर्य व्यवसायमा लागेको हुँ । यो पेशालाई अपनाउँदै जाने नयाँ नयाँ कुराहरु भेट्दै गँए । यो क्षेत्रमा भिज्दै जाँदा एउटा नशा जस्तै भयो । विगत १४ वर्षदेखि निरन्तर यही क्षेत्रमा सक्रिय छु । सुरुमा यो व्यवसाय वनेपामा सुरुवात गरेको थिए । अहिले काठमाडौंको नक्सालमा ट्रेनिङ सेन्टर खोलेर महिलाहरुलाई ट्रेनिङ दिएर आत्मनिर्भर बन्नमा सघाँउदै आएको छु ।
व्यवसायमा के कस्ता चुनौतिहरु छन् ?
हिजोका दिनमा धेरै चुनौतीहरु थिए । ति सबै चुनौतीहरुको सामना गर्दै गँए । अर्थात हिजोको दिनमा यो व्यवसायमा लाग्दा हेयको दृष्ट्रिले हेरिन्थ्यो । साच्चै भन्ने हो भने हिजो हामी यस्तो समाजमा थियौं । त्यहाँ कुनै दिदी बहिनीले पार्लर जान्छु भनिन भने अभिभावकहरुलाई आफ्ना छोरी/बुहारी बिग्रेछन भन्ठान्थे । तर आज समाज परिवर्तन भएको छ । चौध वर्षको मेरो अनुभवले के देखाएको छ भने आज समाज धेरै हदसम्म परिवर्तन भएको छ । आज धेरै दिदी बहिनीका बुबा आमाहरु आफ्ना छोरी चेलीलाई हाम्रो इन्सिच्यूटमा ल्याउनुहुन्छ र आग्रह गर्नुहुन्छ मेरो छोरीलाई पनि तपाई जस्तै (एक्सपर्ट) सक्षम बनाई दिनुहोस, सीप सिकाई दिनुहोस भनेर लिएर आउनुहुन्छ । मेरो छोरीले पनि आफैंले गरेर खान सक्ने बनाउनुहुोस भन्दै आउनुहुन्छ । एउटा आईडलको रुपमा मान्नुहुन्छ । यो क्षेत्रमा चुनौतीहरु जति छन त्यो भन्दा धेरै गुणा अवसरहरु छन ।
यो व्यवसायमा दीगो रुपमा टिक्नका लागि के चाहिन्छ ?
यो व्यवसाय छाला र कपालसँग सम्बन्धित व्यवसाय हो । त्यसैले यदी हामीले राम्रो सरसामनहरु छनोट गर्न सक्यौं भने नारीको सुन्दरतालाई अझैं चमक ल्याउन सक्छौं । छोटो समयको फाइदा मात्र हेर्ने हो र त्यस्ता सरसामान प्रयोग गर्ने हो भने आफ्नो व्यापार त बढाउन सकिएला तर व्यवसाय दीगो हुन सक्दैन । अरुले पत्याउनदैनन । यो एक प्रकारको विज्ञान नै हो । भनिन्छ नि सौन्र्दय विज्ञान । जसरी डाक्टरले भित्री रोग पत्ता लगाएर विरामीको उपचार गर्छन । ठीक उसैगरी हामीले बाहिरी सौन्दर्यलाई डाक्टरले जस्तै उपचार गर्छौ ।
तपाई पुना ब्रान्डको अफिसियल व्युटी पनि हुनुहुन्छ । तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ पुना व्राण्ड ?
नबुझिकन पुना व्राण्डको अफिसियली विशेषज्ञमा म नियुक्त भएको होइन । दुई महिना अगाडी पुना कम्पनीका साथीहरु आउनुभएको थियो । उहाँहरुले स्याम्पल ल्याउनुभएको थियो । त्यस्को अध्ययन गरें । दुई चार जनामा परीक्षण पनि गरें । वैज्ञानिक रुपमै अध्ययन अनुसन्धान गरेर उत्पादन गरिएको रहेछ पुना । नेपालमा पाइने सौन्दर्य सामाग्री भन्दा यो नितान्त भिन्न पाए । यसकारण कि पुनामा परफुर्यमहरु एकदमै कम मात्रामा प्रयोग भएको रहेछ । प्राकृतिक यस्को अर्काे विशेषता हो । गर्भवती महिलाहरुको अनुहार एकदमै सवेंदनशील हुन्छ । त्यस्ता गर्भवती महिलाहरुका लागि समेत प्रयोग गर्नै मिल्ने प्राकृतिक जडिबुटीहरुबाट उत्पादित रसायन बिहिन हुने प्रर्फुयम प्रयोग गरिएको भेटियो । एकदमै राम्रो ब्राण्ड नेपालमा भित्रिएको मैले महसुस गरेकि छु । नेपाल भित्रिएको थोरै समयमा नै यस्को माग वढ्दो छ । दुईवटा डिलरबाट मात्र ६० हजार भन्दा बढी पिस उठाई सक्नु भयो ।
तपाई आफै नाम चलेको सौन्दर्य व्यवसायी । नारीले आफ्नो सौन्दर्यलाई कायम राख्न के के गर्नुपर्छ । केही टिप्स दिनुहोस न ।
सबैभन्दा पहिला त दैनिक हेरचाह गर्नुपर्दछ । मेक अफ गर्नुभन्दा पनि भित्री सुन्दरतालाई नै निर्खानुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु । जब शरिर स्वस्थ छैन,भोजन जथाभावी खाइन्छ ,व्यायम गरिदैन बाहिर जति सुकै मेक अफ गरे पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । इनर व्युटीलाई सधैं ख्याल गर्नुपर्दछ । त्यस्तै जब हामी सौन्दर्यका सामाग्री प्रयोग गर्दछौं त्यो समयमा राम्रा व्राण्डको सामाग्रीहरु प्रयोग गनु पर्दछ । सामाग्री प्रयोग गर्नु अगाडि कहाँ बनेको हो,बनेको मिति,उत्पादन सकिने मिति,प्रयोग भएका सामाग्रीहरु बारेमा पनि उत्तिकै जानकारी राख्नुपर्दछ । यति गर्न सकेको खण्डमा सकेको हामी सधैं सुन्दर देखिन्छौं ।
One thought on “नबुझिकन पुना ब्राण्डको अफिसियली विशेषज्ञमा म नियुक्त भएको होइन”
Rupa Dangi says:
पहिला त तपाई लाई बदाईं छः. तपाई ले सवइ सलाह सूजाब राम्रो लाग्यो। . तर यउँटi कुरI मलाई भुजाई दिनुन. .क़ुन ढाउ मा बनेको समान चाही राम्रो हुदो रहेछ. देंश हो की सहर. ब्राण्ड क़ुरा त थाह थियो. तर …..थाउ थाहाँ पाऊँ न.
सपना चकनाचुर भएपछि प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई हटाउने बाटो खोज्दै देउवा
पास नहुने भयो चिकित्सा शिक्षा विधेयक, अब के गर्लान डा. केसीले ?
प्रचण्ड देशप्रति वेइमान,कांग्रेसप्रति इमान्दार !